Inkcazo Inkcazo - iKhomistry Glossary
Imilinganiselo eyahlukileyo yoConjugate kwiKhemistry
Kwi-chemistry, kukho ezintathu iinkcazo ezinokwenzeka ukuba igama elithi "conjugate".
(1) I-conjugate ibhekisela kwikomidi elenziwe ngokuhlanganiswa kwezinto ezimbini okanye ngaphezulu kweekhemikhali.
(2) Kwiingcamango ze- Bronsted-Lowry ze-acids kunye neziseko , igama elithi conjugate libhekisela kwi-asidi kunye nesiseko esahlukileyo komnye nomproton. Xa i-asidi kunye nesiseko isabela, i-asidi ifometha isiseko sayo se-conjugate ngelixa i-base iyenza i-conjugate acid:
Isisiseko se-asidi + con i-conjugate base + i-conjugate acid
I-HA yesicatshulwa, i-equation ibhaliwe:
HA + B A A - + HB +
Utolo oluphendulayo lubonisa kokubili kokushiya kunye nokunene kuba ukuphendulwa kwendlela yokulinganisa kubanjelwa kwindlela ehamba phambili yokwenza iimveliso kunye nezikhokelo eziphambili zokuguqula iimveliso eziya kuma-reactants. I-asidi ilahleka iproton ukuba ibe yiseko yayo ye-conjugate A - njengoko isiseko B samkela iphrotheni ukuba ibe yi-conjugate acid HB + yayo .
(3) Ukudibanisa kukugqithiswa kwe-p-orbitals ngaphaya kwe-bond ye-σ ( isibophelelo sesigama ). Kwiinguqu zentsimbi, i-d-orbitals ingadlulela. I-orbitals iye yafudula i-elektrononi xa kukho ukutshintshana okungaqhelekanga kunye neendidi ezininzi kwi-molecule. Iibhondi zitshintshwe ngekholeji kangangokuba i-athomu nganye ine-p-orbital ekhoyo. Ukuxilwa kwetyala kunciphisa amandla e-molecule kwaye kwandise ukuzinza kwayo.
Ukuxubana kuqhelekileyo ekuqhubeni iipolym, i-carbon nanotubules, i-graphene kunye negraphite.
Kubonakala kwimilolekyu yendalo. Phakathi kwezinye izicelo, iinkqubo ezidibeneyo zingenza i-chromophores. I-Chromophores yimiloleksi engakwazi ukufumana imilinganiselo ethile yokukhanya, ebangela ukuba ibe nemibala. I-Chromophores ifumaneka kumatshini, i-photoreceptors yelihlo, kwaye ikhanyise kwiingubo ezimnyama.
Inkcazo yeBond Multiple
Yintoni Umthetho WeGesi Olungileyo?
I-Capillary Action Definition kunye nemizekelo
I-Acid Inkcazo kunye nemizekelo
Umthetho kaCharles Umzekelo Ingxaki
I-Gypsy Moth (i-Lymantria ilahlekile)
I-Tasseled Wobbegong Shark
Umkhombe waseKafzeh, u-Israel: Ubungqina boMbindi wePaleolithic Buri
I-Zircon, i-Zirconia, i-Zirconium Minerals
I-Array-Line Arguments kuRuby
Gqibezela uluhlu lweeKomiti zeMidlalo yeBhola leBhola laseKholeji
Ukufa kunye neDye
I-ATP Inkcazo - Kutheni i-ATP i-Molecule ebalulekileyo kuMetabolism
I-Biography yeWWE Diva Sable
Iipopayi eziphezulu kunye neengoma ezivela ku-1986